चुनावी प्रतिबद्धता कति पूरा, कति अधुरा ? – Sajha Bisaunee
दिनेश गौतम/श्यामप्रसाद भण्डारी । १४ आश्विन २०७७, बुधबार ०९:०० मा प्रकाशित
३१ वैशाख २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । जसमार्फत कर्णाली प्रदेशका १० वटा जिल्लाका ७९ वटै तहमा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भए । यो २० वर्षपछि भएको चुनाव थियो । स्थानीय ठाउँमा शासन गर्नको लागि स्थानीय व्यक्तिहरू निर्वाचित भएर आए । यो चुनावको महŒव किन पनि उच्च थियो भने विगतका स्थानीय तहभन्दा बढी अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार चलाउने जनप्रतिनिधि छनौट गरेको थियो । जनप्रतिनिधिहरूबाट नागरिकमा अपेक्षा पनि धेरै थियो । तर अपेक्षाअनुसार काम हुन भने सकिरहेको छैन । त्यति मात्र होइन धेरैजसो जनप्रतिनिधिले चुनावको समयमा गरेका प्रतिबद्धता नै पूरा गर्न सकिरहेका छैनन् ।
२०७४ वैशाख ३१ को निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आएपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संलग्नतामा असार महिनामा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्यायो । उक्त नीति तथा कार्यक्रममा नगरपालिकालाई पूर्ण डिजिटललाइज्ड गर्ने विषय क्रममा उल्लेख नगरिएको भए पनि त्यसपछि नगरपालिकाले ल्याएका तीन वटा नीति तथा कार्यक्रममा भने नगरपालिकालाई डिजिटल बनाउनका लागि विभिन्न नीतिहरू लिइने कुरा उल्लेख छ । त्यसैगरी बुलबुले–बराह–जाजुरादेखि अपर कर्णाली टूर प्याकेजलाई प्रोत्साहन गर्ने विषय जनप्रतिनिधि आइसकेपछिका चार वटा नीति तथा कार्यक्रममा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन ।
कृषिजन्य उत्पादनको लागि ऋणको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता भएको भए पनि नीति तथा कार्यक्रममा ऋणभन्दा पनि अनुदान तथा प्रोत्साहनको विषय प्राथमिकताको साथ राखिएको छ । त्यस्तै शिशु केन्द्र स्थापना र लाइब्रेरी स्थापनाको विषय पनि पहिलो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छैन । त्यसपछिका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा शिशु केन्द्र, बाल विकास केन्द्रको विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखिएको छ । लाइब्रेरी स्थापनाको विषय कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नगरिएको भए पनि २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रममा हाल सञ्चालनमा रहेका लाइब्रेरीको सञ्चालनको लागि प्रोत्साहन गर्ने कुरा उल्लेख गरिनेछ ।
नगरबसको विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा भेटिँदैन् भने हाटबजार सञ्चालनको कुरा पनि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छैन । तथापि दोस्रो आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक वडामा हाटबजारको स्थापना गर्ने विषय राखिएको छ तर त्यसपछिका नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय उल्लेख छैन । भेरीको पानी लिफ्टिङ्गको प्रतिबद्धता पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छैन । त्यसपश्चातका नीति तथा कार्यक्रममा यस सम्बन्धमा स्पष्ट नलेखिएको भए पनि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको खानेपानी समस्या समाधानको लागि नगर महŒवको योजनाको रूपमा अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक शौचालयको कुरा उल्लेख नभए पनि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा तीन वषभित्र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका सबै १६ वटा वडामै सार्वजनिक सौचालय स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ । त्यसपछिका दुई वटा नीति तथा कार्यक्रममा पनि सार्वजनिक शौचालयको विषयलाई प्राथमिकताको साथ राखिएको छ । खाद्य संस्थान स्थापना र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधानको विषय नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र नपर्ने भएकाले नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखिएको छैन । त्यसैगरी गरिबीको आधारमा रासन कार्ड वितरण गर्ने कुरा पनि कहीँ कतै भेटिँदैन । सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई सहज रूपमा लाभान्वितसम्म पु¥याउन तथा असहाय बालबालिका तथा अन्य असहाय नागरिकको लागि हालसम्मका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा विभिन्न विषयहरू उल्लेख छन् ।
२. वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पर्यटकीय गुरूयोजना निर्माण गरेको छ । पर्यटन नक्सा पनि निर्माण गरेको छ । त्यसका अलवा काँक्रेविहार, बुलबुले, गढी लगायतका पर्यटकीय स्थलहरूमा पहुँचमार्ग र भौतिक संरचना निर्माणको काम भइरहेको छ । प्रदेश सरकारको सहयोगमा पार्क निर्माण गरेका छौं । चौघान पार्क र रानीघाट क्षेत्रको पर्यटकीय धाम निर्माणको काम चलिरहेको छ । अन्य वडास्तरका पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि संरक्षण र सम्वद्र्धनको काम भइरहेको छ । उत्तरी जलाधार संरक्षणको पाटोमा काम गरिरहेका छौं । काँक्रेविहारको पूरा काम गर्न संघीय सरकार र पुरातŒव विभागसँग पहल गरिरहेका छौं ।
३. कानुनका हिसाबले ऋणको व्यवस्था गर्न सकेका छैनौं । तर कृषि उद्यमीलाई प्रबद्र्धन गर्नका लागि विभिन्न दातृ निकायहरूसँगको सहकार्य र सहयोगमा खासगरी तरकारी उत्पादन, कुखुरापालन आदिमा अनुदानका कार्यक्रम ल्याएका छौं । अहिलो कोभिड–१९ प्रभावितको लागि यूएनडीपीको परियोजना छ जसमा नगरपालिकाले पनि साझेदारी गरेको छ । अहिले ऋण दिन नसकेपनि सानो मात्रामा अनुदान उपलब्ध गराएका छौं ।
५. नगर बसको लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले सञ्चालन खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन । कि त निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्नुप¥यो । निजी क्षेत्रसँग जान केही प्राविधिक समस्याहरू हुन्छन् यो छलफलको विषय हो । हामीले प्रदेश र संघ सरकारबाट निःशुल्क बस पाइन्छ कि भनेर सर्भे गरेर केही प्रयत्न त ग¥यौं ।
१७. सामाजिक सुरक्षा भत्ता घर–घरमै पु¥याउने भनिएको भए पनि त्यसलाई हामीले व्यक्तिको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएका छौं । एक किसिमले घरमै पुगेजस्तो पनि भयो ।
१९. एक घर एक रोजगारी अभियान अन्तर्गत वैकल्पिक व्यवस्था नहुञ्जेलसम्म वर्षमा कम्तीमा ३ महिना रोजगारीको व्यवस्था गर्ने भनेको थियौं । यो कार्यक्रम अन्तर्गत संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । हामीले यसको लागि सहजीकरण गरिरहेका छौं । सबै वडामा बत्ती पु¥याउँदै छौं । सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था बनेका छन् । ५६ वटा सडकहरू यसैवर्ष स्तरोन्नति र कालोपत्रे हुँदैछन् । १५ शैयाको अस्पताल र नगर अस्पताल बन्दैछ । प्रदेश र संघ सरकारको सहयोगमा नगर चक्रपथ निर्माणको काम भइरहेको छ ।